Apple ichavhura Apple Store nyowani munharaunda yeBrooklyn | IPhone nhau
Apple kuvhura Apple Store itsva munharaunda yeBrooklyn
Kamwe Apple payakamisa michina muChina, mushure mekuvhura angangoita makumi mana ezvitoro zvayo mumakore maviri, kambani iri kutarisa kune dzimwe nyika dzakaita seMexico uko iri kuronga kuvhura zvitoro zvekutanga kutanga kwegore rinouya. Asi pamusoro pezvo, ari kuzvipirawo kwaari kugadzirisa mukati mekare maApple Stores, sezvo mazhinji acho asina kuvandudzwa kubvira pavakavhura makore gumi nemashanu apfuura, sekukuzivisai kwatakaita mazuva mashoma apfuura.
Asi pamusoro pezvo, kambani iri kudzidzawo wedzera huwandu hwezvitoro zvauinazvo kare mumaguta akasiyana siyana sezvazviri kuitika kuNew York, uko Apple yakaburitsa ingadai yasvika muchibvumirano chekuhaya nzvimbo inosvika zviuru zvitanhatu zvemakiromita munharaunda yeWilliamsburg yeBrooklyn, ichiisa mukana wekuguma kwegore rino.
Pamusoro pe uye kusimbisa idzi runyerekupe, pane peji apo Apple inotumira basa rayo rinopihwa tinogona kuona kuti zvatoita sei michina yekuhaya uye kudzidzisa vashandi vanodiwa yaiswa mukushanda kubata chitoro ichi chitsva. Semazuva ese nguva iyo Apple inoronga kuvhura Apple Store nyowani, kambani iri kutsvaga kubva kuvashandi vevatengi kuchengetedza chitoro maneja, wepamusoro uye wekupedzisira munhu anotarisira yega Apple Store iyo kambani inovhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Apple kuvhura Apple Store itsva munharaunda yeBrooklyn
WWE 2K iri kutengeswa kwenguva shoma
IOS 9 Matanho Ekutarisa Anosvika Mamwe manomwe Nyika